China Wholesale Silky Liquid Foundation 8 loko tsy misy lanjany 30ml miaraka amina volon-koditra voajanahary sy ny orinasa mpamokatra Formula Moisturizing | Jinfuya
Wholesale Silky Liquid Foundation 8 miloko tsy misy lanjany 30ml miaraka amina volon-koditra voajanahary sy Formula Moisturizing
Ity Silky Liquid Foundation ity dia endrika tsy misy lanjany, malefaka, misy endrika famolavolana, afaka manampy amin'ny famoronana makiazy vita amin'ny crème izy io ary tsy ho sandoka izany rehefa mitafy tarehy.
izany Fondation Silky Liquid dia endrika tsy misy lanjany, malefaka, misy endrika mamono, afaka manampy amin'ny famoronana makiazy fototra izy io ary tsy ho sandoka izany rehefa mitafy tarehy.
mihasimba Mamy, malama, landy
Mety amin'ny Alokaloka 8 misy amin'ny tahiry, loko hafa mety ho OEM
Atiny Net 1.01 fl. oz. (30mL)
asa Afeno ny mason-koditra, ny fifehezana solika, ny fifangaroana tsara amin'ny hoditra voajanahary, ny raiketana manalefaka dia mampihatra tsara ny tarehy
Ny fototray dia mampifangaro tanteraka ny fiheverana sy ny hatsaran-tarehy amin'ny vokatra makiazy iray. Izy io dia manana endrika maivana, marefo, malama ary mora atosika, maharitra sy mamirapiratra, mamoaka ilay hoditra mamirapiratra mandritra ny andro, mamirapiratra mamirapiratra voajanahary sy mangarahara. Ity fototra ity dia mety pores tsy hita maso, ary tsy matavy. Mitsonika ao anaty hoditra eo noho eo izy, ary ny makiazy tsy misy kilema dia toa mando sy voajanahary mandritra ny andro, mamela anao hanala ny lohateny hoe "tarehy sandoka" ary ho tsara tarehy voajanahary.
Ny Luminous Silk Foundation dia mirakitra loko madio sy avo lenta ary fangaro madio tsy misy fangarony izay namboarina tsara ho an'ny tsiranoka tsy manarona izay mampiseho ny famirapiratan'ny hoditra voajanahary.
Fantaro ny antony itiavantsika an'ity fototra ity:
1. Maivana, manome sakana ara-batana amin'ny masoandro sy ny fandotoana izay maharitra tontolo andro.
2.Satin vita, manjelanjelatra sy mijery salama kokoa.
3.Asehoy ny hazavanao anatiny. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny landy charmeuse, The Fabric of Emperors, ity fototra mamirapiratra ity izay miroraka tsy misy lanjany ho an'ny hazavana tsy misy kilema avy ao anaty. manatsara ny endrika sy ny blurs tsy fahalavorariana.
Teo aloha: Fototra tsy misy solika tsy misy fatrany Matte Liquid fototra fandrakofana feno 20ml fananganana maharitra maharitra miaraka amin'ny SPF15
Manaraka: Pensily malefaka OEM Volomaso malefaka voajanahary mineraly mitady pensilihazo misy loko 3 miaraka amin'ny borosy
Fondation Silky Liquid
Fandraisana an-tsokosoko ranon-javatra miafina 6ml matte farany ...